JAWAAB HADALKII MADAXWEYNE KU XIGEENKA BY: AXMED CABDI CIISE | Toggaherer's Blog
JAWAAB HADALKII MADAXWEYNE KU XIGEENKA BY: AXMED CABDI CIISE
Hadalkii Madaxwayne kuxigeenka Somaliland ee nuxurkiisu ahaa waa siduu hadalka uu dhigaye “hadaynu nahay Somaliland oo aan filayaa imika maamulka qabsaday Koonfurta Soomaaliya in aynu la jaan-qaadi karno, maxaayeelay waa dhalinyaro cusub oo da’dii 1960-kii talinaysay meesha way ka baxday”.
Hadlkaasi waxaa ku cad fariinta uu xambaarsan yahay oo ah in maanta xaalada la marayaa ay tahay tii sanadkii 1960 oo kale. Waa sanadkii 1960 kii markay Somaliland qaranimadeedii iyadoon wax shuuruda iyo gorgortan ah la galini ay Somaaliya ku biirtay, halkaan ay ka dhalatay Jamhuuriyadii la isku odhan jiray Jamhuuriyada Somaaliya (The Somali Republic).
Madaxwayne kuxigeenku waxa uu ku doodayaa Israac nooca maantu uu ka duwan yahay kii 1960. Isagoo taa sababaynaya waxa uu ku doodayaa mar kale in hogaanka maanta talada Somaaliya uu haya ee Sheekh Shariif Axmed uu yahay nin dhalin yaro ah oo dadii ka talinaysay 1960 meesha ka baxday, cadaalad daradii dhacday 49 sano ka hor ayna Sheekh ka suurobayn. Hadalkaasi wax uu mugdi galiyay qadiyada Somaliland madaama madaxwayne kuxigeenku yahay masuulka labaad ee xukumda Somaliland ugu sareeya. Waxana u soo hanbalyeey hadalkiisa dadka Somaliland ka soo horjeeda ee ku dooda midnimada Somaaliya waa muqadis.
Madaxwayne kuxigeenku isagoo soo kicinaya wakhtigan 49 ka dib sanadkii 1960 wax uu mar saddexaad ku doodayaa midnimadii Somaaliya ha la soo celiyo, Somaliland aqoonsi helimayso, Somali kala guimayso, dadka been baa loo sheegayaa, xududo la kala xidhimaayo, nina Hargeeysa ama Muqdisho laga celinmaayo. Intaasi marka laysku geeyo waxay ka mid yihiin rukumada iyo tirarka qaran madax banaan oo xor ihi u ku fadhiyo. Waxa u hadalkaasi fajac iyo amakaak ku riday saaxibada Somaliland eey hormoodka ka yihiin dalalka USA iyo EU oo ugu cadcad yahay dalka UK. Saxiibada Somaliland waxay cadaadis ku saaren Africa Union (AU) ina arinta Somaliland ee beesha caalamka ku noqotay laf hunguri gashay in sanadka 2009 xal ka gaadho, balse go’aankodu uu noqdo mid ka turjumaya rabitaanka shacbiga Somaliland. Tani waxay ku kaliftay dalalka AU in saddexdii sano ee u dambeeyey in wadamda Africa, sida Kenya, Senegal, South Afria, Ethiopia, Ruwanda, Brundi iyo dalal kale oo kamida ah European Union iyo USA ay u soo diirsadaan gudiyo xaqiiqa raadisa ah (Fact finding missions). Ujeedada gudiyadaasi xaqiiqa raadisku waxay ahyid inay soo ururiyaan xogta dhabta ah ee rabitaanka shacbiga Somaliland si ay qay uga noqoto rukumada go’aan ay qadiyada Somaliland ka gaadhan dalalka AU. Balse hadalkii madaxwayne kuxigeenka oo ka turjumaya xukumada Somaliland waa mid si gaar ah loo soo qorsheeyey oo la doonayo in caalamka loo tuso in Somaliland ay ka jiraa shacbi iyo madax qaran oon raali kahayn in Somaliland ka godo Somaaliya talna ku darsadaan. Taasibay tahay fariinta madaxwayne kuxigeenku bulsha da caalamaka u gudbinaayey.
Hadalka madaxwayne kuxigeenku waa mid meel ka dhac ku aha:-
1. Kumayaalkii kun ee naftooda u huray xoriyada Somaliland;
2.Kumayakii kun ee cuduradu iyo gaajada xeryaha qaxootiyada ugu dhintay;
3. kumayaalkii kun ee eheladii geesiyadii naftooda u huray dib xoreynta Somaliland ee manta dhaqaale xumida iyo duruufa adag ugu nool dalka;
4. kumayaalka kun ee reer Somaliland e dadaalka ugu jira habeen iyo maalin sidii Somaliland loo aqoon san lahaa; iyo
5.kumayaalka kun ee dalkooda hantida gashaday si wax uga qabtaan durufaha dhaqale xum ee dadkooda haysta.
Isku soo xori waxa uu hadalkii madaxwayne kuxigeenku ka turjumaya siyaasad xumada dawlada manta talada dalka haysa oo u argta in manta doorashada madaxtinimda ee loo qondeeyey inay ka dhacdo dalka 29 March 2009 aan wax raja ah ka qabin una aragta mid u dhaxaysa labada xisbi qaran ee UCID iyo Kulmiye.
Hadalkii gudoomiyah xisbiga UCID ee arinta ku saabsanayid waxay ahyid in qadiyada Somaliland anay gorgortan gali karin oo uu ka xigo dagaal, madaxwayne kuxigeenkana anu hadalkiisu ka turjumayn rabitaanka shacbiga Somaliland.
Waxaan ku soo koobayaa maqalkaygan in xisbiga UCID uu ka tacsiyadaynayo shacbiga Somaliland hadalkan ka soo yeedhay madaxwayne kuxigeenka oo ah mid baalmarsan qadiyada gooni isutaaga Somaliland iyo distoorka dalka uu yaal, islamarkaana xagal daacis ku ah dadaalka wayn ee shacbiga Somaliland gude iyo dibadba ugu jiraan aqoonsi buuxa oo ay Somaliland ka hesho beesha caalamka sanadkan 2009.
Xoghayaha Iskaashiga Caalamiga ee Xisbiga UCID ahan xubin Gudiga Fulinta ah (member of executive committee)
Please email your comments and views on this article to: Isseahmed@hotmail.com